कुन महिनामा जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ! थाहा पाई राख्नुहोस् – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/कुन महिनामा जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ! थाहा पाई राख्नुहोस्
संसारमा विभिन्न भौतिकवादी विचार र दर्शनको विकास भए पनि ज्योतिष शास्त्रलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न सकेको देखिँदैन।
नास्तिक विचार राख्नेहरूका लागि यो खबर उचित नलाग्न सक्छ । तर पूर्वीय दर्शनले ज्योतिष शास्त्रलाई स्वीकार गरेको सन्दर्भमा यो खबर जायज लाग्न सक्छ।
नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा अझै पनि लाखौँ मान्छे ज्योतिष शास्त्रलाई आधार मानेर आफ्ना कामहरू अगाडी बढाइरहेका छन् । मान्छेको जीवनमा ज्योतिष शास्त्रको दृष्टिले धेरै नै फरक पार्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भएको छ । आउनुहोस्, कुन महिनामा जन्मेका महिलाहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ जानकारी हासिल गरौँ।
वैशाख : यो महिनामा जन्मिएका महिला सामान्यतया सुन्दर आँखा भएकी हुन्छन् । यी महिलाको स्वभाव सरल र सहज हुन्छ । यी महिलाहरू कम खर्च गर्ने तर धेरै क्रोध भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ ।
ज्येष्ठ : ज्येष्ठ महिनामा जन्म लिएका महिलाहरू उत्तम बुद्धि भएका हुन्छन् । उनीहरूको जीवनमा सुख र धन सहजै प्राप्त हुन्छ । यी महिलाहरूका लागि जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि कार्यहरूमा समस्या हुँदैन । यी महिलाहरू तिर्थधर्म गर्नेमा अगाडी हुन्छन्।
आषाढ : आषाढमा जन्मिएका महिलाहरू मीठो बोली बोल्छन् । उनीहरूको आवाजमा मधुरता हुन्छ । कडा मेहनत र सङ्घर्षमा पनि उनीहरूले सोचे जस्तो सुख र धन प्राप्त नहुन सक्छ।
साउन : साउन महिनालाई पवित्र र शुभ महिना मानिन्छ । यो महिनामा जन्मिएका महिलाहरू राम्रो र धार्मिक काममा बढी मन लगाउँछन् । उनीहरूको जीवनमा समान रूपमा सुख, दुःख, फाइदा र नोक्सान हुने देखिन्छ । यी महिलाहरूले सन्तानबाट सुख प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अधिकांश समय कुनै न कुनै बिमारीबाट घेरिरहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाहरू श्रीमान् तथा प्रेमीबाट अधिक प्रेमको आशा राख्ने गर्दछन् ।
भाद्र : यो महिनामा जन्म लिएका महिलाहरूको मिठो बोली र सरल स्वभाव उनीहरूको विशेषता हो । उनीहरूलाई श्रीमानबाट पनि अत्यन्तै सुख र प्रेम मिल्छ । घरपरिवार सासू ससुराबाट माया र सम्मान प्राप्त गर्छन् । यी महिलाहरू अलि जिद्दी स्वभावका पनि हुन्छन् । उनीहरूको जिद्दीका कारण धेरै पटक समस्याहरू आइपर्दछ।
असोज : असोज महिनामा जन्मिएका महिलाहरूको स्वभाव चञ्चल हुन्छ । उनीहरू कसैसँग कुरा गर्दा पनि सतर्कता अपनाउँछन् । धन प्राप्त गर्नुका साथै श्रीमानबाट पनि सुख मिल्ने र सन्तानबाट चिन्ता हुने देखिन्छ।
कार्तिक : कात्तिकमा जन्म लिने महिला धनवान् र बुद्धिमानी हुन्छन् । उनीहरू धेरै कलामा निपुण हुन्छन् । मिठो बोल्छन् । सामान्यतया यी महिलाहरूले आफ्ना श्रीमानलाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छन् । घरपरिवार सासू ससुरासँग पनि झगडा गर्ने तथा झगडालु हुन्छन् । उनीहरूमा कफसम्बन्धी बिमारी बढी देखिन्छ ।
मङ्सिर : यो महिनामा जन्म लिने महिलाहरू नरम स्वभावका हुन्छन् । यी महिलाहरू बिस्तारै कुरा गर्छन् । उनीहरूलाई झुटो कुरा गरेको मन पर्दैन । धार्मिक काममा मन बढी जान्छ । साथमा धन सञ्चित गर्ने र खर्च पनि अधिक गर्छन् भने उनीहरूलाई पेटसम्बन्धी समस्या बढी हुने सम्भावना रहन्छ ।
पुस : पुस महिनामा जन्मेका महिलाहरू सामान्यतया अत्यन्तै क्रोधी हुन्छन् । यी महिलाहरू आफ्नै कामबाट भाग्य निर्माण गर्ने खुबी राख्छन् । सबैसँग मिलजुल गर्ने स्वभावका कारण समाजमा मान सम्मान पाउँछन् । यी महिलामा टाउको दुख्ने, वायु र बात रोगको समस्या बढी देखिन्छ ।
माघ : माघमा जन्मिएका महिलाहरू सुन्दर अनुहारका हुन्छन् । सरल र सहज स्वभावका हुन्छन् तर अलि जिद्दी स्वभाव र अरूलाई कुरा गर्दा पुरा कुरा गर्न नदिने स्वभावका हुन्छन् । यी महिलाहरू कमजोरीका कारण विभिन्न रोगको सिकार हुने पनि देखिन्छ ।
फाल्गुन : फागुन महिनामा जन्मिने महिला धेरै दया वान हुन्छन् । उनीहरू कसैको पनि दुःख देख्न सक्तैनन् । उनीहरूको स्वभाव र विचार बढी धार्मिक हुन्छन् । यी महिलाहरू पढाइ लेखाइमा अत्यधिक तेज हुन्छन् ।
चैत : यो महिनामा जन्मिएका महिला चलाख र चतुर हुन्छन् । सुन्दर हुनुका साथै चञ्चल स्वभावका कारण अरूलाई छिटो आकर्षण गर्छन् । धनबाट पनि उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । कहिलेकाहीँ उनीहरूमा क्रोध हाबी हुनाले समस्या पनि ल्याएको हुन्छ ।
ओलीकै पक्षमा उभिए गौतम,वामदेवकै पत्नीले गरिन् ओलीको सर्मथन
विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने तयारी